URincón del Vago: Ezo zixhobo zisikhuphile ngaphandle kwengxaki-iGeofumadas
I-Rincón del Vago: Ezi zixhobo ezasisiphumela ngaphandle kwenkathazo kanye
NgoSeptemba, 2018 Internet kunye neBlogs
Ngokuqhelekileyo kuthiwa ixesha lokufunda likhululekile kakhulu kwaye lihle kakhulu kumaxesha onke ebomini bomntu. Yilelo xesha lobomi xa umntu ehlala engakhathali, ngaphandle kokudinga ukucinga kakhulu ngomsebenzi ngaphandle kokukhathazeka ngekamva; ixesha lokuphila xa kukukhathazeka kuphela okukuyo ngenxa yomsebenzi othile olindelekileyo okanye uvavanyo oluya kuvunywa.
Nangona kunjalo, ngokuqinisekileyo sonke siye sadibana nexesha elithile ebomini ngaphambi komsebenzi ongasishukumisi kakhulu kwaye kungekhona nje loo nto, kunzima ngathi ukwenza okanye ukwenza kakuhle. Ngokuchanekileyo kwezi zizathu kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kukho kunye nemali yolwazi oluncedo oluza kuthunyelwa kuwebhusayithi https://www.rincondelvago.com. Akunandaba nokuba kuhlaziywa kwencwadi okanye ukuba ufuna ukufumana impendulo kumbuzo Yintoni enokuyenza xa kwenzeka ukuqhuma kwentaba-mlilo, kule ndawo ungayifumana isiqulatho kuzo zonke iintlobo.
Ngoku, khawucinge ukuba umfundi wesikolo esiphakamileyo onomdla kwezobunjineli okanye amayeza kufuneka abhale isifundo esibalulekileyo malunga nabalinganiswa abakhulu Don Quixote okanye nayiphi na enye iklasikhi. Ngaphandle kwenkuthazo kunye nokungakhathali okuninzi, lo msebenzi ubonakala ngathi awunakwenzeka, akunjalo? Kwangokunjalo, ukuba umfundi oluthandayo uncwadi kufuneka enze umsebenzi wasekhaya wesifundo sekhemistri okanye sefiziksi, umsebenzi unokuba nzima nokuba nzima ngakumbi. Le misebenzi ihlala inyanzelekile kwaye ayithathi ngqalelo ingqalelo yomdla wabafundi. Ngokuchasene noko, phantse ngalo lonke ixesha ngumfundi "onetyala" ngokungawugqibi umsebenzi ngempumelelo okanye ngokungawenzi umsebenzi wesikolo kwangexesha. Ngamaxesha amaninzi inkqubo yezemfundo ichaza abafundi "njengamavila" okanye "abangasebenzi kakhulu." Kodwa kuba "abantu abonqenayo" bane "kona" yabo imeko ibhetele kakhulu.
Le webhsayithi inika abafundi ngeendlela ezahlukeneyo zomxholo, ukusuka kwimimandla eyahlukeneyo yokufunda kunye nezihloko ezahlukileyo. Kodwa mhlawumbi into ebaluleke kakhulu ukugxininisa apha kukuba iphepha lihlanganisa yonke into okanye phantse zonke izihloko ezinomdla xa kuziwa ekusebenzeni ezikolweni okanye kwiiyunivesithi. Ngako oko, abafundi abaziva bengashukumisekanga ukwenza umsebenzi wesikolo somxholo kuphela kufuneka baqonde ukuba iyeza liye kwaye kufuneka bazi apho bajonge khona.
I-Rincón del Vago inikeza zonke iintlobo zomxholo, enoba zihambelana neMathematika, iMbali, iiLwimi, ukuCoba okanye uMthetho. Ukongeza, umxholo kweli phepha lihlelwe kakuhle ngokubhekiselele kulo mbandela, ngenjongo yokubonelela abafundi abanokufikelela kunye nokukhangela ulwazi olufunekayo. Xa isiqendu sifumaneka, abafundi banakho ukulahla umxholo ofunekayo ukulungiselela uviwo, benze umsebenzi wabo wesikolo okanye ubhale iphepha. Kwaye into engcono kunazo zonke ukwazi ukuba, ngokungafani namaxesha adlulileyo xa umxholo ubekho kwii-encyclopedias kwiithala zeelayibrari, le ngcaciso isondele, kumgama wokukodwa, kwaye sinokukufumana naliphi na ixesha naphi na.
Ngokufanayo, ngaphandle komxholo ofunekayo ukwenza umsebenzi ongasishukumisayo, kweli phepha sinokufumana amanqaku amaninzi kwiimfundiso ezithandayo. Umzekelo, umfundi onomdla wobunjineli unokufumana oko akufunayo ukubhala incoko yeklasi yakhe, kodwa ngelo xesha unokufumana amanqaku avela kwintsimi yakhe enomdla. Unokufumana iimpapasho malunga Iminyaka eyi-40 yekhnoloji yeselula yeselula, apho sithetha ngokuphuhliswa kwesi sixhobo esisebenzisayo sonke namhlanje. Ngokufanayo, ukuba sinomdla kwi-geografi, sinokuzikhuphela iimibhalo ezithetha ngeendawo ezingaziwa kakuhle kwihlabathi leNtshona, njenge-Afghanistan, okanye ilizwekazi laseAfrika.
Kwakhona kubalulekile ukukhankanya iMagazini iRincón del Vago, eyiphepha lephepha lewebhu apho iindaba ezinxulumene nentsimi yemfundo ipapashwa. Ezi ndaba zihlala ziqulethe ulwazi oluxabisekileyo nje kuphela kubafundi, kodwa nakwabafundisi kwiindawo ezahlukeneyo. Ngokomzekelo, eli phephancwadi liqulethe amanqaku malunga nentuthuko entsha yenteknoloji, iindlela zokufundisa, ukufunda kwi-intanethi okanye abanye abangasinika izixhobo ezifanelekileyo ekufundeni okanye kwinkqubo yokufundisa. Ngendlela efanayo, amaphephancwadi ashicilelwa apha kwiingcali ezivela kwimimandla eyahlukeneyo enokubakho umdla kwaye banenzuzo kubalingane babo. Kwakhona, eli phephancwadi lipapasha ulwazi malunga nezifundo ze-intanethi ezinokubakhathalela, kungakhathaliseki ukuba zezifundo kunye nobume bekhosi ngokwayo.
Kuzo zonke izinto ezithe zatsho ngaphambili, iRincón del Vago inokuthi ithathwa ngokuba yi-"partner partner" yethu, elo qabane elihlala linamanqaku kwaye sonke sinalo okanye sinalo. Ukwahlukana kuphela kukulungele ukufumana ulwazi esikudingayo, kuba le nto, njengoko sele ikhankanywe ngaphambili, iqhosha elilodwa kwaye lifumaneke ngamaxesha onke.
Ukugqiba, kubalulekile ukuba nomthombo wolwazi olunje, ozimisele ukusinika umxholo oyifunayo kwizihlandlo ezinzima. Kodwa kuyafuneka ukuba kuqaphele ukuba kubaluleke kakhulu ukuba ukwazi ukusetyenziswa kwimixholo enjalo, oko kukuthi, ukuba kucacile ukuba le yintetho kuphela kwaye umsebenzi wethu phantsi kwazo zonke iimeko unokukopishwa umxholo ngenxa yokuba oko kuya kwenza ukuba kubekho ukulungelelanisa.
Post edlulileyo«Ngaphambilini I-6 geo-engineering zeprinteli zokukhuphela mahala
Post Next Iikholeji zeArcGIS ezifanelekileyoOkulandelayo »